Gamer wepụtara mbipute Fallout 76 tupu Bethesda
Tupu nkwụsị nke Fallout 76, ọ ka fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa ise fọdụrụnụ, ma onye ọ bụla nwere ike ịkwadebe maka ibu na ihe isi ike nke egwuregwu egwuregwu multiplayer ga-eweta ya. Mgbanwe maka Ụgha 4, nke onye ọrụ ahụ mepụtara site n'aha aha ya bụ SKK50, ka e mere iji weghachite atụmatụ ndị dị na ọrụ Bethesda ọhụrụ na engine ochie.
Kedu ihe mkpuchi ndụ na VKontakte, na otu esi tinye ya
Netwọk mmekọrịta "VKontakte" kwa ọnwa na-atụgharị uche na ndị ọrụ ya na innovations na ibe na ndị asọmpi enweghị. Oge Disemba a abụghị otu. Ikekwe, ihe kachasị mmasị, site na njedebe nke afọ, bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke ndị Runet - live cover maka ìgwè VKontakte. Ọdịnaya Ihe dị ndụ na-ekpuchi Ihe dị iche iche nke eji ihe mkpuchi Esi mee ihe mkpuchi ndụ na VKontakte: nzọụkwụ site na ntụziaka Ntugharị mkpuchi Live cover karịrị nnọọ akwụkwọ akara maka obodo mara mma.
Gigabyte Aorus AD27QD - nyocha nke mbụ ụwa
Gigabyte na-akwadebe ịhapụ ihe nyocha mara mma 27 nke Aorus AD27QD. Ihe ọhụrụ, dịka onye na-emepụta kwuru, ga-enwe ike inye ndị egwuregwu ihe karịrị ndị iro na egwuregwu kọmputa. Gigabyte Aorus AD27QD dabeere na panel panel nke IPS na mkpebi nke 2560x1440 pikselụ na oge kachasị elu nke 144 Hz.
Kpọsara egwu nke Maid nke Ahịa
Egwuregwu ahụ na-ewe iri kilomita site na ụlọ ọrụ mmepe nke mmekọrịta Wales. Aha egwu ahụ na-ezo aka na nrọ Welsh nke aha ahụ na akwụkwọ Richard Blackmore bụ The Girl from the Scher, nke e bipụtara na 1872. Otú ọ dị, site na ọrụ ndị a, ejikọta egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na aha ebe ọrụ - Sker House (Sker House), nke dị na ndịda nke Wales.
Ochioma ojoo: Aghaghi kagbuo ihe ojoo nke agony nke ugboro abuo.
Agụgharị egwu egwu nke hell, nke ụlọ ọrụ Madmind Studio, rụrụ, wepụtara na mbipute a na-atụghị anya ya, na-enweghị ụfọdụ azụmahịa, ụda na mmemme. Ndị na-emepe ihe na mbụ eburu ịlaghachi ihe egwuregwu ahụ maka ndị egwuregwu ahụ na ngwugwu, wee banye n'ụdị egwuregwu dị iche iche, mana atụmatụ abụọ ahụ wee bụrụ ọdịda.
Steam kpọrọ aha egwuregwu kachasị egwu nke ọkara mbụ nke 2018
Ọrụ nkesa dijitalụ maka egwuregwu Steam emeela ka a mara atụmatụ egwuregwu maka ọkara mbụ nke 2018. Na Russia, Rocket League, Counter-Strike Global Offensive, PUBG na GTA 5 so n'ime utu ndị ahịa kachasị mma, steam ochichi kwadebere ndepụta dị iche iche nke ngwaahịa ọhụrụ kachasị mma, ọrụ VR na egwuregwu nke ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu na-egwu n'otu oge.
Egwuregwu Electronic mara ọkwa na e kere usoro ikuku egwuregwu igwe ojii
A na - akpọ nkà na ụzụ si EA Project Atlas. Nkwupụta kwekọrọ na kọntaktị nke Electronic Arts mere nduzi na-ahụ maka ụlọ ọrụ Ken Moss. Project Atlas bụ usoro ígwé ojii maka ndị egwuregwu abụọ na ndị mmepe. Site n'echiche onye gamer, enwere ike inwe ihe ọhụụ ọ bụla pụrụ iche: onye ọrụ na-enweta ngwa ahịa ma malite egwuregwu na ya, nke a na-edozi na sava EA.
Onye kere Undertale wepụtara teaser omimi nke egwuregwu ọhụrụ ya
Na-akpọ ndị na-egwu egwuregwu ka ha soro na nnyocha ahụ. Ụbọchị ọzọ na akaụntụ Twitter nke egwuregwu Undertale, tọhapụrụ afọ atọ gara aga site na onye mmepụta nke Toby Fox, njikọ dị na deltarune.com, bụ ebe a na-akpọ ndị ọbịa ka ha budata otu onye nchịkọta na isiokwu SURVEY_PROGRAM ("Poll Program").
Ndị mmepe na-ahapụ Electronic Arts n'ihi Star Wars
A na-ekwu na ebubo nke Star Wars Battlefront nke Abụọ. Ụlọ ọrụ Swedish nke DICE, bụ nke Electronic Arts, nwere ihe dị ka pasent 10 nke ndị ọrụ ya n'afọ gara aga, ma ọ bụ ihe dị ka mmadụ 40 n'ime 400. Otú ọ dị, dị ka akụkọ ụfọdụ si kwuo, ọnụ ọgụgụ a dị ala ọbụna karịa nọmba ahụ. Enwere ihe abụọ kpatara ọpụpụ ndị mmepe si DICE.
Ịchekwa na nrụzi ngwaọrụ ga-eri Apple ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde $ 7
Otu ụlọikpe Australian nyere iwu nke ọma ihe dị nde nde dollar Australian na Apple, nke dị nde dollar 6.8. Otutu ụlọ ọrụ ahụ ga-akwụ ụgwọ maka ịjụ ịrụzi smartphones na-akwụ ụgwọ, nke a na-ejigide n'ihi "njehie 53", ka akwụkwọ akụkọ Australian Financial Review na-akọ. Ihe a na-akpọ "njehie 53" mere mgbe etinyechara ya na iPhone 6 nke usoro nke itoolu nke iOS ma mee ka ị ghara igbochi ya.
Ndị na-emepe ihe FIFA dozie mmejọ nke iwe
EA tọhapụrụ ya maka akara FIFA 19, nke mere mgbanwe ọ bụghị naanị na egwuregwu ahụ, kamakwa edozire nghọtahie nke ghọworo otu meme. Dika onye na-egwu egwu nke afo iri abuo, Petr Cech, nke na-egwu egwu ugbu a na Arsenal na London, amaghi maka nani oru ogwu ya, kamakwa maka ọdịdị ya: mgbe enwere nnukwu mmerụ n'afọ 2006, Cech na-eburu ubi ahụ na okpu agha.
12-isi AMD Ryzen processor gbaa elu na UserBenchmark benchmark
Eziokwu ahụ bụ na ndị nhazi nke Ryzen 3000 usoro ga-enweta ihe karịrị asatọ cores, isi nke AMD Lisa Soo kwuru izu abụọ gara aga, ma kpọmkwem ọnụ ọgụgụ nke ibe na nkeji ọhụrụ nọ na-amaghi n'oge a. Ihe ọhụrụ data site na UserBenchmark benchmarking saịtị dịtụ ghọtara ọnọdụ: ọ dịkarịa ala otu 12-isi nlereanya ga-abụ na ọgbọ atọ Ryzen CPU ezinụlọ.
Firaxis na-aga n'ihu ịkekọrịta nkọwa nke ọhụrụ ntinye maka ọdịda nke Isii
Na nbịakwute na-abịanụ nke Oké Nchịkọta Mmadụ na Civilization VI ga-abụ mba ọhụrụ. Alaeze Ukwu Ottoman, nke Suleiman siri ike, mere ka ọ bawanyewanye site n'omume agha agha. Otu ihe pụrụ iche nke mba ahụ ga-abụ, dịka na njedebe nke egwuregwu ahụ, ndị Janissaries. Ha ga-apụta na ndị Ottoman kama ịkọ ndị ọkachamara. Ngalaba ndị a enwekwuola ike na ọnụ ala dị ala tụnyere nkeji oge ha.
Twitter amachibidoro akaụntụ 70 nde
Ọrụ microblogging Twitter na-ebido ịlụso spam, trolling na ozi adịgboroja ọgụ. Naanị ọnwa abụọ, ụlọ ọrụ ahụ egbochila ihe dị nde 70 ndebanye na ọrụ ọjọọ, ka Washington Post na-ede. Twitter malitere iji iwepụ ihe ndekọ spam kemgbe October 2017, mana na May 2018, nnukwu mkpọchi ahụ mụbara.
Onye na-agba mgbu nke ukwuu na 90s na-ekiri nnukwu ákwà
A na-akwadebe otu ngosipụta nke Duke Nukem, otu n'ime ndị na-ama ụma na-agba ama na narị afọ gara aga, maka mmepe. Ndị na-ede akwụkwọ na-ekwe nkwa ịṅụrị ọṅụ na-atọ ọchị ma na-arụ ọrụ dị omimi na ụdị "Ụgha". Ụlọ ọrụ ahụ ka na-arụ ọrụ n'oge na-eme atụmatụ, ma ọ bụrịrị eziokwu na asịrị.
Facebook na-akwụ ụgwọ ọrụ na nzuzo maka ndị nchịkọta
Na 2016, netwọk mmekọrịta netwọk Facebook wepụtara ngwa Facebook Research, nke na-ekpuchi omume ndị nwe ama ama na-anakọta data ha. Maka ojiji ya, ụlọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ ndị ọrụ $ 20 kwa ọnwa, nke ndị oru nta akụkọ dere site na TechCrunch online. Dị ka ọ na-apụta n'oge nchọpụta ahụ, Facebook Research bụ nsụgharị gbanwetụrụ nke ndị ahịa na-ahụ maka ndị na-ahụ maka Vvo.
Instagram na-ebido vidio vidio maka vidiyo vidiyo
Instagram agwala ọkwa mwepụta nke ọrụ vidiyo nke na-enye gị ohere ibudata ma lee ntinye vidiyo maka otu awa. Ndị ọrụ ga-enwe ike ile vidio dị otú ahụ ma na Instagram n'onwe ya nakwa na ngwa pụrụ iche - IGTV. Dị ka Instagram CEO Kevin Sistrom si kwuo, e mepụtara ozi ọhụrụ maka iji ihe dị iche iche nke mgbasa ozi na smartphones na ọ bụ ya mere na vidiyo niile na ya ga-adabere n'eziokwu.
Ihe ntanetị WhatsApp ga-apụta
Enweghi ike inweta ozi maka ndi mmadu ajuju na ozi WhatsApp, ma nke a nwere ike gbanwee n'oge na-adighi anya. Dika WabetaInfo ntanetị n'Ịntanet, ndị na-emepụta ọrụ echeworị ihe ọhụrụ na nsụgharị beta nke ngwa gam akporo. N'ihi na oge mbido akwụkwọ oge mbụ pụtara na mgbakọ nyocha WhatsApp 2.
Studio Bethesda kwuru banyere atụmatụ maka mmepe Fallout 76
Ndị mmepe dị na Bethesda na-enye atụmatụ atụmatụ mmemme nke Fallout 76 shooter-MMO Players na-echere site na ihe atọ zuru ụwa ọnụ, nke ọ bụla dabara na oge kpọmkwem n'afọ. N'oge opupu ihe ubi a ga-enwe mmelite "Wild Appalachia". A ga-enwe ihe omume mbụ na March 12, a ga-enye ndị na-egwu egwuregwu ịṅụ biya na machibidoro "moonshine kernels" na egwuregwu ahụ.